शरीरलाई दैनिक कति पानी चाहिन्छ ? यस्तो छ पानी पिउने तरिका – Complete Nepali News Portal
शरीरलाई दैनिक कति पानी चाहिन्छ ? यस्तो छ पानी पिउने तरिका
April 30, 2017	6,653 Views
आदर्श प्रधान, मनोपरामर्शदाता होलिस्टिक माइन्डस्, धापासी
स्वस्थ शरीरका लागि पानी सेवन गर्नु निकै नै महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने धेरैलाई थाहा छ । तर, एक दिनमा पानी कति पिउने भन्ने विषयमा भने विज्ञहरूका फरक–फरक मत पाइन्छन् । धेरैजसोको बानी हुन्छ कि पानी नै नपिउने वा तिर्खा लागेको समयमा एकैपटक धेरै पिउने । यसरी एकैपटक धेरै पानी पिउनु पनि स्वास्थका लागि पक्कै राम्रो मानिँदैन । यसले गम्भीर खालको समस्या पनि ल्याउन सक्छ । धेरै पानी पिउँदा हाइपोनट्रेमिया रोग पनि लाग्न सक्छ । हाइपोनट्रेमिया रगतमा सोडियमको मात्रा कम भएर लाग्न सक्छ । शरीरलाई आवश्यकभन्दा धेरै पानी हँुदा पिसाबबाट धेरै नुनको मात्रा छोटो समयमा बाहिर जान्छ । धेरै पानी छोटो समयमा छान्नुपर्दा किड्नीलाई पनि असर पर्न सक्छ ।
खासमा एकदिनमा पानी यति नै पिउनुपर्छ भन्ने खासै नियम छैन । तर, आफ्नो शरीरलाई आवश्यक पर्ने परिमाणमा भने पिउनु लाभदायक हुन्छ । प्रत्येक मानिसको शारीरिक बनावटअनुसार पानीको मात्रा पनि फरक–फरक आवश्यक हुन्छ । सामान्यतया प्यास लाग्दा पानी पिउने गरिन्छ । कुनै मानसिक थकान वा मानसिक रूपमा तनाव हुँदा पनि छिनछिनमा पानी पिउन मन हुन्छ । त्यसैले यस्तो समयमा दिनमा धेरैपटक गरेर पानी पिउनु राम्रो हुन्छ । एकपटकमा सकेसम्म दुई गिलासभन्दा बढी पानी नपिउँदा ठीक हुन्छ । इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिनले गरेको एक अध्ययनअनुसार युवा उमेरका पुरुषलाई दिनमा तीन लिटर पानी पर्याप्त हुन्छ । त्यस्तै, महिलाले भने २ दशमलव २ लिटर पानी पिउनु उत्तम हुन्छ ।
पिसाबबाट थाहा हुन्छ पानी नपुगेको
आफ्नो शरीरमा पानी पुगेको छ्छैन भन्नेबारे पिसाबबाट पनि थाहा पाउन सकिन्छ । हलुका पहेँलो रङको पिसाबलाई सामान्य मानिन्छ । यदि पिसाब गाढा पहेँलो या सुनौलो रङको छ भने पानीको मात्रा नपुगेको भनेर बुझ्नु आवश्यक छ । यस्तो वेला पर्याप्त मात्रामा पानी सेवन गर्नु राम्रो हुन्छ । तर, कहिलेकाहीँ पिसाबको रङ हेरेर पानी पुगेको नपुगेको पत्ता लगाउन कठिन हुन्छ । भिटामिन बी कम्प्लेक्सजस्ता औषधि सेवन गर्दा पनि पिसाबको रङ गाढा पहेँलो देखिन सक्छ । यसका साथै अन्य केही औषधिहरू सेवन गर्दा पिसाबको रङ परिवर्तन हुन्छ । जब हामी धेरै कसरत गर्छोैँ सो समयमा शरीर धेरै तातो हुन्छ । त्यतिवेला तुरुन्त पानी पिउनु राम्रो हुँदैन । यदि पिउनै पर्ने भएमा पनि दुई गिलासभन्दा बढी सकेसम्म नपिउनु नै फाइदाजक हुन्छ ।
पानी पिउने उपयुक्त समय
बिहान उठ्नेबित्तिकै एक या दुई गिलास पानी पिउनु राम्रो हुन्छ । त्यसपछि खाना खानुभन्दा करिब आधा घन्टाअघि पानी पिउनु उचित हुन्छ । खाना खाएको एक घन्टापछि पानी खाने गर्नुपर्छ । त्यस्तै, खाजा खानुभन्दा आधा घन्टा अघि र खाजा खाएको एक घन्टापछि पनि पानी पिउनुपर्छ । राति पनि खाना खानुभन्दा आधा घन्टाअघि र खाना खाएको एक घन्टापछि पानी पिउनु अत्यन्त फाइदाजनक हुन्छ । खानासँग पानी पिउनु राम्रो हुँदैन ।
पानीको विकल्प छैन
पानी नपिएर अन्य झोल पदार्थहरू पिउनुलाई पानी खाएको मान्न सकिँदैन । कपियले जुस, चिया आदि पिएर पानी नपिउने पनि गर्छन् । यसरी शुद्ध पानी छुट्टै नपिउँदा पानीको कमीले गर्मी मौसममा डिहाइड्रेसन पनि हुन सक्छ । यसबारे पनि सचेत हुनु आवश्यक छ ।